Tan-dalàna… fomba fisaina sy fiaina | NewsMada
Tan-dalàna… fomba fisaina sy fiaina
Anisan’ny fanambin’izao fitondrana izao ny hoe fanjakana tan-dalàna. Mby aiza? Lazaina amin’izany ny hoe tsy misy olona ambonin’ny lalàna. Tanàna tsy ilaozan’adala? Misy ny mialokaloka amin’ny tsy fahalalana lalàna; eny, na fantatra izao fa tsy misy olona heverina ho tsy mahalala lalàna amin’ny fanajana sy ny fampiharana izany.
Ekena, misy tokoa ny tsy mahalala na mandika vilana lalàna. Mila ezaka ny fampahalalana didy aman-dalàna? Indrindra ny famoahana azy amin’ny teny malagasy azon’ny rehetra… Ny mahavalalanina sy mahafanina, ireo heverina ho mahalala lalàna no minia mandika lalàna matetika. Manao fanahy iniana? Na mamantatra lalàna hodikaina…
Tombontsoa na toerana manokana ny antony? Na fiheveran-tena ho hafa hoe ambonin’ny lalàna, na fanamparana fahefana, na tsy firaharahana ny hafa… Samy mety halaim-panahy amin’izany ny eo amin’ny fitondrana na ny fanoherana? Na mpanatanteraka, na mpanao lalàna, na mpitsara; eny, isan-tsehatra sy isan’ambaratonga.
Matoa atao fanamby ary ezahina tratrarina hatrany ny hoe fanjakana tan-dalàna, mbola misy na be ny tsy tan-dalàna. Eo amin’ny fanajana sy ny fampiharana no manahirana? Na fanaovana izany ho fomba fiaina… Misy ny olom-boafidy na olom-boatendry tena tsy tan-dalàna. Tampohim-pahefana? Na hoe mahalala olona ka tsimatimanota…
Na ahoana na ahoana, tsy handaitra amin’ny maro eny ifotony izay fampiharan-dalàna raha mbola misy ihany tsimatimanota. Izany, ohatra, ny mahatonga ny hetsi-panoherana didy aman-dalàna, ny fitsaram-bahoaka… Mila olona sy ohatra tahafina ny fanajana sy ny fampiharan-dalàna na amin’ny inona na inona, na aiza na aiza, na iza na iza…
Mila fifanaraha-maso, fifampitandremana… Tanteraka sy azo iainana ankalalahana ho fomba fiaina sy kolontsaina amin’izay ny fanajan-dalàna… ifampifehezana. Manafaka ny lalàna fa tsy mangeja, manome hasina ny tena fa tsy manao zinona. Ho menatra ny tenany ho azy ny tsy tan-dalàna amin’izany raha samy manaja lalàna ny maro?